Ukuthenga eSicily | Ukuhamba kwe-Absolut
Uma liphuma ukuthenga eSicily, lungela ukujabulela ukugibela uhambe nakho ekhaya, okwakho noma okwakho, izipho ezingenakulibaleka. Lolo hlobo lwezinkumbulo okufanele uzibuke, uzinuke noma uzinambithe ukusithatha ngokushesha kulolo hambo oludabula emazweni ase-Italy.
Yini esingayithenga eSicily? Izinto eziningi, ezinye zivakashela kakhulu ezinye zingenzelwa lutho. Esihlokweni sethu namuhla uzothola ukuthi yiziphi izinkumbulo ezinhle kakhulu nezikhumbuzo ezinhle ongaletha kusuka kulesi siqhingi sase-Italy esithandekayo nesibukekayo.
1 Ungathenga kuphi eSicily
2 Yini ongayithenga eSicily
Ungathenga kuphi eSicily
Izinto zokuqala kuqala: uzothola izitolo eziningi zabavakashi nezikhumbuzo eziningi ezikhiqizelwe ikakhulukazi izivakashi. Ungazithenga, kepha uma ungomunye walabo abafuna okuthile okukhetheke kakhulu noma ngaso sonke isikhathi ucabanga ngesipho esihle kakhulu salabo abasilindele ekhaya, khona-ke kufanele uhambe ngaphezulu kancane.
Vele kuzoncika ekutheni uhambo lwakho uhleleke kanjani noma uzozihambela wedwa noma ngeqembu noma ohambweni. Kepha, ngangokunokwenzeka, kufanele suka emzileni wabavakashi ukuthola okungcono kakhulu. Manje, singaqala kuphi ukuthenga? Kukholwe noma ungakukholwa, ezitolo ezinkulu nezitolo zezaphulelo.
Kunjalo, yize kuyinketho yezitolo ziningi umkhiqizo wendawo futhi, isibonelo, amawayini amahle kakhulu avela kubakhiqizi abakhulu. Kukhona okuhle empambana maphakathi nePalermo ethengisa amawayini amahle kakhulu kanye nezinto ezijwayelekile zokuhlobisa. Vuliwe ILidl, Trapani, okufanayo. Uyawuthanda ukhilimu wepistachio? Ngakho lowo ovela eLidl muhle futhi unentengo enhle.
Ngaphandle kwezitolo ezinkulu noma izitolo ezibalulekile ungavakashela i- ukudla, the izimpahla ezivamile nezincane lapho ungathenga khona noma yini kusuka ephepheni lasendlini yangasese kuya kumpuphu yokuwasha. Ngaphandle kwalokhu, iqiniso yilokho ezinye izingcweti zendawo zibeka izinto zazo lapha hhayi ezitolo ezinkulu. Ngikhuluma ngamasoseji, amasoso, ujamu.
Enye indawo enhle yokuthenga yile emakethe noma imakethe yendawo. Lowo oseSirakuse muhle, uyiSicilian kakhulu. Kakhulu ukuthenga okwamanje, inhlanzi noma i-shellfish, njengoshizi, amantongomane nezinongo. Izimpahla ezishibhile nazo ziyathengiswa. I- izitolo, okufanayo.
Kunezimakethe kuwo wonke amadolobha amakhulu kanti ezinye zivulwa nsuku zonke kanti ezinye zivulwa kanye ngesonto. Emadolobheni amancane izimakethe zivame ukuhlelwa kanye noma kabili ngesonto. Ukwazi ukuthi kufanele nje uye nini ehhovisi lezivakashi ubuze.
I-Las iwayini enye inketho noma efanayo, iwayini. Ungathatha ukuvakasha kwesivini uthenge amabhodlela lapho, okuzoba eshibhile impela kunasezitolo zewayini. Ngaphezu kwalokho, kuma-wineries bazokufundisa kangcono ngamawayini futhi ngeke kudingeke uthenge ngenxa yokuthi lihle kanjani ibhodlela. Kepha uma ungeke ukwazi ukwenza lezi zindawo zama ukuthenga ezitolo ezincane, ezingezona ezabavakashi. Ngisho vakashela esitolo, njengoba sishilo ngenhla.
Yini ongayithenga eSicily
Isikhumbuzo esihle futhi esiwusizo kakhulu, ukuthenga i- ibhasikidi lokuthenga, elenziwe ngezandla, elidumile futhi elihle amabhokisi. Zihlotshiswe ngemibala eminingi nangompompi, izibuko nokunye, futhi kunezitayela eziningi. Okunye ukuthenga okungaba khona yi- imikhiqizo yamatshe e-lava.
Khumbula ukuthi eSicily kunezintaba-mlilo ezimbili ezisebenzayo, iNtaba i-Etna eseduze kwedolobha laseCatania kanye nelincane eStromboli. Iqiniso ukuthi imigwaqo eminingi yaseSicily ifakwe amatshe amakhulu entaba-mlilo futhi kukhona nezinye izakhiwo, futhi, lapho itshe lentaba-mlilo elalinjengesitini lisetshenzisiwe. Ngakho-ke, kunemikhiqizo eminingi eyenziwe ngaleli tshe eliyimpunga, kusuka ku- namasongo, izitsha zokuhlobisa, izimbiza ...
Uyayithanda i-coral? Futhi kuyatholakala lapha izinto zamakhorali: kusuka kumacici nemigexo, okulula noma okuningiliziwe, ezintweni zokuhlobisa. Umbala wamakhorali ubomvana kancane noma ubomvu kakhulu, futhi uma ufuna okungcono uzobathola eTrapani.
La I-ceramic ye-Caltagirone kuyinto enhle. ICaltagirone ingelinye lamadolobhana ayisishiyagalombili avikelwe yi-UNESCO, eVal de Noto. I-baroque kakhulu futhi i-Sicilian kakhulu ngasikhathi sinye, futhi ubumba lumnandi: izitsha, izingilazi, amapuleti, ama-urns, amathreyi ...
Uyayithanda i- onodoli? Inkundla yemidlalo yabapopayi baseSicilian iyaziwa, i-Opera dei Pupi ibisebenza kusukela ngekhulu le-XNUMX futhi iyamangalisa. Bobabili uCatania noPalermo banesiko elihle futhi eliqinile kulo mkhakha. I- Onodoli baseCatania Mikhulu kunalawo asePalermo, kodwa emadolobheni womabili uzothola izitolo eziningi ezinesithembiso esithandeka kakhulu. Kuningi onodoli abenziwe ngezandla muhle futhi kunamanani amaningi.
Uma uzogqoka izigqoko, manje njengoba ukushuka kungaphansi futhi kuyimfashini, ungathenga i- isigqoko esivamile seCoppola. Uma bekuhlala kuhlotshaniswa nama-mafia, namuhla indaba yehlukile futhi kunentsha eningi ekhethe ukugqoka lesi sigqoko esihlekisayo. cha, Mkhulu. Bazalwe njengezigqoko ezenziwe ngesandla ePalermo, zoboya obubunjiwe, kepha kukhona izinhlobo ezipholile, zasehlobo, ezenziwe ngokotini.
I-Italy ngeke ibe yi-Italy ngaphandle kwe-pasta enhle, ngakho-ke inketho enhle kakhulu yokuthenga thenga i-pasta eyomile okulula ukuthutha nokunikela njengezipho. Kukhona umkhiqizo omuhle kakhulu, Mahhala Terra, okuvela ngqo emikhakheni ekhululwe ekulawulweni kwama-mafia ngokuthanda imiphakathi yendawo.
Esigabeni esedlule sikhulume ngaso thenga iwayini kuma-winery noma kuma-winery amancane. Kuyafaneleka, makwaziwe ukuthi iSicily ibisenza iwayini kusukela okungenani ngo-1500 BC ngakho-ke ibe nesikhathi sokuzilungisa futhi inikeze okuhle kakhulu.
Kunezindawo ezingama-23 ezikhiqiza iwayini esiqhingini, kepha izinhlobo ezaziwa kakhulu nge USyrah noMarsala. Okungaziwa kancane kepha mhlawumbe yingakho isipho esihle kungu Nero d'Avola futhi i U-Etna Rosso. Kukhona abakhiqizi abakhulu njengeTasca d'Amanita noma abancane, njenge-COS, eyenza iwayini lemvelo nelingokwemvelo.
Futhi yimuphi umngane ongcono wewayini kune ucezu ushokoledi? Akunandaba ukuthi uya eSicily phakathi nehlobo. Kukhona isitayela esithile sikashokoledi lokho ayincibiliki: el Isitayela sikaMonica kuthengiswa emabhawa. Inezimpande zama-Aztec, ezivela phesheya kolwandle, futhi yenziwa ngobhontshisi we-cocoa noshukela, konke kuphenduke kwaba unamathisela futhi okunongwe noma ngo-ezisawolintshi, noma ngesinamoni noma ngekhofi. Zisongwe ngephepha elincanyana kakhulu nomfana, unesipho esihle kakhulu.
Ekugcineni, eSicily kunezitolo eziningi zamakhekhe, izinto eziningi ezine-marzipan, kepha lokho kuthatha isimo solamula, ama-cherry kanye namapheya. Imayelana nabadumile Izithelo zaseMartorana, izithombe ezibaziwe, kangangoba zibukeka njengezithelo zangempela. Futhi azigcini nje ngokwenza izithelo kodwa futhi namaswishi abukeka njengangempela. Konke kusongwe nge-finesse, njengama-chocolate.
Ungangitsheli lutho, njengamanje ufuna ukuvakashela iSicily.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuthenga eSicily
Isiko lamasiko nezakhiwo zePopayán
IPrati, enye yezindawo zikanokusho kakhulu eRoma